စမ်းချောင်းမြို့နယ် လ၀က မှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လပ်စားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » စမ်းချောင်းမြို့နယ် လ၀က မှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လပ်စားခြင်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ် လ၀က မှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လပ်စားခြင်း
Posted by chityimhtoo on Sep 29, 2011 in Complaint / Claim | 14 comments
ကျွန်တော့ရဲ့အသိတစ်ယောက်က မကြာသေးပါဘူး အန်တီကြီးတစ်ယောက်အသက်ကလည်း ၆၀ကျော်နေပါပြီ နယ်ကပြောင်းလာတာရန်ကုန်ကို။သန်းခေါင်စာရင်းကလည်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းပြီးသားပါ။သူက ဗုဒ္ဓဂါယာ သွားဘို့အတွက် ပတ်စပို့လုပ်ဘို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်က လ၀က ရုံးကို
ပုံစံ ၁၇ သွားလုပ်တော့ ဟိုဟာမရှိဘူး ဒီဟာမရှိဘူးပေါင်းများစွာနဲ့ မျိုးစုံအောင် ရစ်ပြီး ပုံစံ ၁၇ကိုလုံးဝမလုပ်ပေးပါဘူး။နောက်တော့ ဦးစီးမှူးကိုယ်တိုင်ကိုက အလှူငွေ ၅ထောင်
ရှေ့မှာလုပ်ပေးတဲ့ မိန်ုးမကို ၅ထောင် စုစုပေါင်း ၁သောင်းပေးမှလုပ်ပေးမယ်ဆိုမှ ဘဲ ပုံစံ ၁၇ ကို ၁သောင်းပေးပြီးလုပ်လာရပါတယ်။ခုလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင် အခကြေးငွေတောင်းပြီး
လပ်စားတော့ အင်မတန်မှစိတ်ပျက်မိပါတယ်။မသိနားမလည်တဲ့ နယ်ကရိုးသားတဲ့လူတွေအပေါ် ကုသိုလ်ကောင်းမှူ့လုပ်ဘို့ ပုံစံ ၁၇လုပ်တဲ့ လူတွေအပေါ်ကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဘဲ
မောင်းထုပြီး အိမ်ရှေ့ က၀င်လာတာလူသိတယ်…..
လပ် စားတာကိုတော့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လူသိပါတယ်၊
ကိုး ကိုလျော်ရတာကိုတော့ ဘယ်သူမှသေသေချာချာသိမည်မထင်ပါ။
၀န်ထမ်းခြင်းကိုယ်ချင်စာလို့ဝင်ပြောတာပါ။ ဒါတွေ ကို ကြိုက်လွန်းလို့၊ အားပေးလို့မဟုတ်ပါ။
တော်တော်ရှုံ့ချပါတယ်။ အထက်အောက် ဒီလိုလည်ပတ်နေရတဲ့ ဘ၀ကို
ကြောင်လေးပြောတာ ကြောင်ကြီး သဘောကျတယ်။ ကြောင်အချင်းချင်း အမြီးထောင်ထောင် မဟုတ်ဘူးနော်။ ကို ဇာဂနာ ထောင်ကလွှတ်ခါစ အင်တာဗျူးတခုမှာ ပြောဖူးတယ်။ သူက အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေ ဂွင်ရိုက်တာ မပြောဘူး၊ အပေါ်ပိုင်း ပြောသင့်တဲ့သူ ပြောရမဲ့အရာကိုပဲ ပြောတယ်လို့ အဲသလိုသဘောမျိုး ဆန်ဆန် ဖတ်ဖူးတယ်။ အောက်ခြေဝန်ထမ်း ကိစ္စတွေကို သိပ်လွန်လွန်းမှ ဖွစေချင်တယ်။ ပိုအရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကနေ ဘေးချော်ထွက်မသွားစေချင်ဘူး။ တဖက်သားကိုလည်း ကံဆိုးသူမောင်ရှင် ထူးပြီးမဖြစ်စေလိုဘူး။
ကိုကြောင်လေးရေ ကြောင်ကြီးအတွက် ငါးကြော်တကောင် ဖယ်ထားပေးပါနော်။
ကိုchityimhtooေ၇ အကောင်းဆုံးကတော့ talk2dvb@gmail.com သာပို့လိုက်။ အဲ့ဒါ ပိုထိေ၇ာက်မယ် ထင်တယ်။ အခုဟာက မြို့နယ်တိုင်း၇ဲ့ ၁၇ ၇ုံးတိုင်းမှာ အဲ့အတိုင်းပဲ လိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ပိုက်ဆံ ပေးမှပဲ၇မယ်။ ပိုက်ဆံ မပေးလို့ကတော့ ၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပတ်၇စ်နေတာ။ ဟိုဟာမပါဘူးလား ၊ ဒီဟာမပါဘူးလား ၊ သွားပြန်ယူအုံး ၊ ဒါမျိုးတွေပတ်၇စ်နေတာ။ လူတွေကလဲ အလုပ်ရှုပ်မခံချင်လို့ ပိုက်ဆံပေးနေတာ။ မြန်မာနိုင်ငံက ရုံတော်တော်များများမှာ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ၁၉ ၇ုံးဝင်၇င်လဲ ၀င်ခ အနေနဲ့ ၅၀၀ ပေး၇တယ်။ လာတဲ့လူတွေက နည်းမှမနည်းတာ ၊ ငွေဆို၇င်ေ၇ပုံးနဲ့တောင် ထည့်ထားတယ်။ တနေ့တနေ့ မနည်းဘူး၇တာ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်လောက်က ပတ်စ်ပို့လုပ်တုန်းကလည်း ၁၇အတွက်ကုန်ခဲ့တယ်
ခုချိန်ထိ ထပ်တက်လား မတက်လားတော့ မသိဘူး
အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရမှာ စိုးလို့ … 17 သွားမလုပ်ဖြစ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ … တော်သေးတာက စလစ်ထွက်ပြီး သုံးနှစ်အတွင်း 17 တင်လို့ ရတာ ကံကောင်းတယ်မှတ်တယ် .. ။
တကယ်ဆို အဲ့လောက် ငတ်နေလျှင်လည်း ဈေးတစ်ခု သတ်မှတ်လိုက်ပါလားနော် … ကြိုက်ရင်လုပ် .. မကြိုက်လျှင် မလုပ်ယုံပဲ ….
မetoneရေ…ညီမကြုံခဲတဲ့ ရုံးကတော့ ဈေးသတ်မှတ်ထားပါတယ်
အရင် ၁၇လုပ်တုန်းကတော့ အဲလိုပဲ
ခပ်တည်တည်ပဲ “တစ်သောင်းပေးပါ” ဆိုပြီး
ဟွင့် (ကိုပေါက်ကျော် စတိုင်)
သူုတို့ခမျာမှာလဲ အထက်က တောင်းတာကို ပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ရသေးတယ်လေ
မထသ ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသား
မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေကို စည်းကမ်းရှိစေဖို့ ဆိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့
ဒါပေမယ့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ
သူတို့ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ တိုင်းမှူးက လစဉ် နောက်ဆုံး လစာထုတ်ရက်ဆိုရင် လာကြီးကြပ်တယ်
ပြန်သွားရင် အလိုက်သိသိ ထည့်ပေးနိုင်ဖို့ လိုတယ်ပေါ့
ဒီတော့ .. လိုင်းပေါင်းစုံမှ ဖြတ်ပိုင်းပေါင်းစုံ နဲ့ ကောက်ရတာပေါ့ ..
လိုင်းတွေကလဲ ပေးထားပြီးသားဆိုတော့ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ကြတာပေါ့
တဆက်တည်း ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကလဲ
မီးပွိုင့်တိုင်းမှာ တခေါက် ၂၀၀ တောင်းပြန်ရော ..
ယာဉ်မောင်းတွေကလဲ ပေးရတာနဲ့ တန်အောင် လမ်းစည်းကမ်းကို ဆက် ချိုးကြပြန်ရော
ပွိုင့် ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကလဲ အထက်အထက်ကို ပူဇော်ရသေးတယ်လေ
ဒါကြောင့် အထက်အောက် အပြန်အလှန် ဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက် ဒီလိုဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတာ
ရုံးတွေမှာ ရေးထားတာကိုက လာဘ်ပေး ရန်မလို တဲ့
ငါးထောင်မျိုး တစ်သောင်းမျိုးတွေထက် ငါးသိန်းမျိုး ဆယ်သိန်းမျိုးတွေကို
သာTARGET ထား စေချင်ပါတယ်။
ဒီမယ်စာရေးသူ လပ် မဟုတ်ဘူး လာဘ် ပါကွာ။မင့်မလဲ ခက်ပေါ့ကွာ။လာဘ်မှုးလို့ ပြောင်းခေါ်ပေါ့ကွာ။
ရှုး …. ရှုး…. တိုးတိုးနော်….
လာဘ်ပေး တဲ့သူ ကဘယ် နှစ်နှစ် ဆိုလား လာဘ်ယူသူက ဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုလား ..
ဆရာတို့ ဒုက္ခ ရောက်နေမယ်.. ရှုး တိုး တိုး ။
ပုံစံ ၁၇ ( အခုအခေါ်က ပုံစံ-က ) ကို ထုတ်ပေးတာက အခွန်ရုံးက ထုတ်ပေးတာ။
လဝက ရုံးက ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ လွဲနေတယ်နော်။
တောင်းကြတာပဲ။ ၁၉ရုံးမှာ ၂၇ရက်နေ့ကတောင် အားလုံးစုံနေတာကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ၁၀၀၀တောင်းနေလို့ ပေးလိုက်ရတယ်။ မပေးပဲ ဟောက်မလို့ပဲ စိတ်ကလည်း ရန်ဖြစ်ဖို့ သိပ်မပါတာနဲ့ ပေးလိုက်မိတယ်။
ဒီမောင် ပြောတာမှန်တယ်။အခွန်ရုံးရေးရမှာလေ။ခုထိလဲမပြင်သေးဘူး။လပ် မဟုတ်ဘူး လာဘ်ပါကွာ။